Kedu ụzọ bụ SEO kacha mma maka ịrụ ọrụ azụmahịa e-azụmahịa?
E nwere ọtụtụ ndụmọdụ na usoro iji jide n'aka na a na-ahụ ma na-agụ ọdịnaya gị. N'isiokwu a, m ga-agwa gị banyere ụzọ SEO kasị mma kwesịrị itinye n'ọrụ mgbe ị na-ekepụta ọdịnaya maka ndị na-ahụ maka azụmahịa n'Ịntanet. Ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ gị bụ ịga nke ọma na e-azụmahịa, mgbe ahụ, ị ​​ga-adaba na ndụmọdụ ndị edepụtara n'okpuru ebe a. Ebe a bụ:
SEO Method # 1: Họrọ Right Right
Keywords mee ka isiokwu gị nweta, jikọọ ihe nchọgharị weebụ na saịtị gị. I kwesịrị inwe echiche doro anya nke ihe ị na-ede gbasara - yacht boat charters. Ọzọkwa, chọpụta nke isiokwu ga-eme ka isiokwu gị chọta.
Ọ bụrụ na ọ dị oke egwu maka ịmepụta otu isiokwu ọhụrụ, ị nwere ike idegharị ndị ochie, gbasaa ọdịnaya ha site n'ịgbakwunye mkpokọta ndị dị ike, itinye akwụkwọ vidio nkọwa, ịmepụta echiche na echiche ndị dị. Were akwụkwọ ndị a na-ewu ewu ma wụsara ha ihe dị ọhụrụ.
Rịba ama na a ga-etinyerịrị okwu mkpịsị ugodi n'ụzọ zuru oke n'ozuzu ya, nakwa yana okwu maka okwu ndị ị họọrọ.
SEO Ụzọ # 2: Tụlee ihe ise kachasị mma maka isiokwu gị
Ndị ọkachamara dị elu na-atụ aro ka ị tinye isiokwu gị n'ime ise ebe dị oké mkpa na post, gụnyere:
Slug: Nke a na-ezo aka na URL na onye ọ bụla ga-ahụ ozugbo ọkwa gị nọ n'ọrụ. Ọ dị oké mkpa ka ị tinye isiokwu gị n'ime URL ka ndị ọrụ wee nwee ike ịchọgharị ma chọta isiokwu gị na weebụ.
Detuo Paragraf Mbụ: Tinye ntinye aka n'ime paragraf nke mbụ nke akwụkwọ gị. Nke a na-eme ka ọ dịkwuo mfe maka Google ịchọpụta ebe nrụọrụ weebụ gị, na ihe dị mfe maka ndị ọrụ weebụ iji ghọta ọdịnaya gị ozugbo ọ pụtara na Google SERP.
ederede ọzọ: Nke a na-abata mgbe i tinyere ihe oyiyi n'ime isiokwu. Dịka ị nwere ike ịma, engines na-achọpụtaghị ihe oyiyi - ha na-ahụ ihe ederede na ha ga-akpọ ya site na copywriters. Dekọọ foto gị niile na nkọwa nke isiokwu na aha ụlọ ọrụ gị.
SEO Mbụ: Jide n'aka na itinye mkpụrụokwu okwu gị na aha gị na aha SEO. Mkpebi dị ukwuu bụ itinye aha ụlọ ọrụ gị na isi okwu ndị ọzọ dị mkpa maka azụmahịa gị. Site na ime nke a, ị na - eme ka ọ dị mfe maka engines ọchụchọ na atụmanya ịkwado weebụsaịtị ebe ị na - achọ ihe ndị a kpọmkwem.
META Nkọwa: Gị meta nkọwa kwesịrị ịgụnye aro isiokwu. Debe ya karịa ihe odide 160. O kwesịrị igosi ọdịnaya weebụ gị ma nye ngwa ngwa maka ndị ahịa gị nwere ike ịnweta mgbe ha na-eme ọchụchọ Google.
SEO Ụzọ # 3: Enwe Ike Njikọ Njikọ
Ma njikọ dị n'ime na nke dịpụrụ adịpụ dị oké mkpa maka ọdịnaya ibipụta gị. Ihe na-enye ihe ọmụma bụ ohere dị ukwuu ịkwọ ndị na-agụ akwụkwọ ndị ọzọ na saịtị gị. Njikọ dị n'ime ya bụ njikọ dị n'ime post gị nke nwere ike ime nke a maka gị. Ndị ọkachamara na-ekpo ọkụ na-atụ aro na ị jikọọ na ibe weebụ ndị na-agụ akwụkwọ nwere ike ịzụta ọrụ ụfọdụ na ngwongwo ị na-enye.
Cheta, ị ga-edozi ma njikọ nke ụlọ gị ma nke ọzọ iji mepee na ibe dị iche iche, kama iji ndị na-ege ntị na-ezigara gị na post gị. Nke a bụ ohere gị iji jikọta ndị dị adị, ihe ndị dị mkpa nakwa.
Ekwela ka ihe omuma gị ghara ịhụ. Mee ya enyi kacha mma nke Google site n'itinye ndụmọdụ ndị dị n'elu. Ha kacha mma SEO ụzọ onye nwe ebe nrụọrụ weebụ kwesịrị iburu n'uche mgbe na-ebipụta isiokwu.